Meles: Afrika Waxay Rumaysan Tahay Heshiiskii Kyoto – Rasaasa News
Meles: Afrika Waxay Rumaysan Tahay Heshiiskii Kyoto
Nov 19, 2011 Meles:Afrika Waxay Rumaysan Tahay Heshiiskii Kyoto
Nairobi, November 19, 2011 [ras] – Ururka Afrikanka [AU] oo doonaya in uu sii socdo heshiiskii Kyoto lagu gaadhay ee isbadalka cimilada aduunka, heshiiskaas oo dhamaan doona sanadka dambe.
Hogaamiyaha wada xaajoodka Au-da, ee isbadalka cimilada R/wasaaraha Ethiopia Meles Zenawiayaa yidhi “heshiiskii lagu saxiixay Japan sanadkii 1997, waa in uu jiraa ilaa iyo inta heshiis kale laga dhamaystirayo.”
Heshiiska Kyoto waa heshiiska kaliya ee suura galin kara qaab loo maro isbadalka cimilada, waxaana si cad looggaga hadlaya bar timaameedka lagu yarayn karo hasakhawga hawada iyo waliba masuuliyada saaran dalalka qaniga ah iyo faqriga ah.
Intii lagu jiray kulanka kooxda wada xaajoodka Afrikanka ah oo Addis Ababa ka dhacay Arbacdii, ayaa Mudane Meles uu hoosta ka xariiqay in baahi weyn loo qabo wada xaajoodyo wax lagu kordhin karo oo soo jiidan kara taageero marka uu dhaco kulanka UN-ta ee isbadalka cimilada oo ka dhici doon bisha dambe Durban.
“Waxaan haysanaa shuruuc cad oo ku saabsan heshiiskii Kyoto, waxaanu jecelahay in aan la xidhiidhno qaybaha kale ee leh ujeedo in ah in heshiisku jiro ama markay ugu yartahay badbaadinaya jiritaanka heshiiskii Kyoto” Mudane Meles ayaa u sheegay wariyeyaal dhamaadkii shirka wada tashiga ah ee ka horeeya kulanka Durban.
Wadamada qaarkood sida Maraykanka, Jaban,Russia iyo Canada ma ayna sixiixin heshiiskii Kyoto,waxayna waydiisteen wadamada kale in uu dhamaado heshiisku sanadka dambe.
Warqa ay AU qortay waxay sheegtay meesha loo badan yahay oo ah in uu sii socdo heshiiska Kyoto marka la gaadho sanadka 2012, uuna jiro qorshe uu aduunku wada qaato oo isku xidhan [horumarinta dhaqaalaha cagaaran] iyo aqoonsiga lacagta lagu balamay ayay tahay mihiimada ugu horaysa ee qaarada Africa.
Xadiis Saxiix ah: Xajka Eebe Weyne Aqbalo Been Kama Daba Marto